Spain oo doonaysa in ay xukun toos ah ku soo rogto Catalonia - BBC News Somali
Spain oo doonaysa in ay xukun toos ah ku soo rogto Catalonia
Image caption Ra'isal wasaaraha Spain
Golaha wasiirada Spain ayaa shir gaar ah ka yeelanaya ansixinta go'aanka lagu doonayo in xukun toos ah lagu soo rogo ismaamul hoosaadka Catalonia si ay toos ugu xukunto xukuumadda dhexe.
Shirkani wuxu qabsoomayaa ku dhawaad saddex todobaad ka dib markii gobolkaasi qabtay afti madax bannaani doon ah oo la isku maan dhaafay, taas oo Maxkamadda Sare ee dalkaasi ku sheegtay mid sharci darro ah.
Hogaamiyaha gobolka Catalonia, Carles Puigdemont, ayaa ku doodaya in natiijada aftidaasi siisay kalsooni shacab oo uu ku baadi doono madax banaani. Laakiin xukuumadda Spain way ku diidantahay arinkaa oo waxay u diyaar garoobaysaa in ay xukun toos ah ku soo rogto gobolkaas oo ay awoodaha dawlad goboleedka la wareegto.
Ra'isal wasaaraha Spain, Mariano Rajoy, ayaa shaaciyey talaabooyin uu maamulka haatan ee gobolka Catalonia kaga xayuubinayo awoodda maamulka isla markaan sida ugu dhakhsaha badan loogaga qaban doono doorashooyin.
Waxaanu ka digay masiibo dhaqaale oo ku habsan doonta gobolkaa hadii ay guulaystaan kuwa gooni u goosadka ahi oo ay dalka Spain kala qaaraan.
Waxaanu intaa ku daray in hogaamiyeyaasha Catalonia aanay si dhab ah iskugu dayin in ay wadahadal la yeeshaan xkuumadda laakiin ay damceen in ay qorshahooda dusha kaga keenaan gobolka iyaga oo iska indho saabaya xisbiyada mucaaradka ah ee Catalonia.